Habaqaa fi Callaa kan Gargar Baasu Ummata | QEERROO
Habaqaa fi Callaa kan Gargar Baasu Ummata
Posted on November 25, 2016 by Qeerroo
Ibsaa Barento irraa
The power of the people is much stronger than the people in powr /JA
Qotee bulaan cimaan tokko maasii/lafa isaa yeroon qotee gulaalee yeroo bokkan robe shanyii gaarii facaasa. Biqila margu saniis jala kotakote, harame, soqee dalla itti jaaree haga midhaan san daraaree ija/free baasee bilchaatutti qotee bulaan kun hedduu humna isaa fi yeroo isaa irratti balleysa. Lakkuma midhaan isaa gara bilchalaa deemuun eeggumsaa fi toa’nnoon cimaa deema, sababni isaas bineesonni baayyeen waan midhaan bilchaate kana nyaachuu barbaadaniif. Guyya guyyaa jaldeesa, qalamee fi shimbiroo yo irraa eegu, halkan halkan dhaddee, booyyee fi karkarroo eega. Haala kanaan midhaan walitti qabatee callaa gara gootaraa yeroo galchu, baaqni gara kosii deema.
Fakkii kana waan tokko kan sammuu ko keessa na jeeqaa ture waan kanaan walfakkaatuufi. Oromoon qabsoo isaa kan sadarkaa amma irra jiru kanan ga’e akkasumatti mit. Ilmaan Oromoo kumaatamni itti dhumee, lafeen gootota meeqaa irratti caccabee, meeqa qaamaa itti irratee, meeqaan saanii akka bahaniin hafanii as ga’e. Keessattuu hoggaan 25 kan murni TPLF erga humnaan Oromia qabate gochaan ilmaan Oromoo irratti deemaa jiru gochaa shanyii duguuginaati. Kun hundi kan Oromoo irratti raawwataa jiruuf waan abbaa biyyummaa isaanii gaafataniif qofa. Akkuma beekkamu diinonni keenya akkuma kaleysaas faallaa qabsoo teenyaa turan, arraas taanaan qabsoon Oromoo sadarkaa amma irra jiru kana ga’uun warri hedduu yaaddoo itti ta’e Oromoota keessaa warra dantaa isaanii tiiksu danda’a jedhanii yaadan ifjalatti hiriirsuun halkanii fi guyyaa Oromoo irratti hojjechaa jiran. Akkumaan fakkeenya gubbatti kaa’e, sadarkaan qabsoon Oromoo amma irra jirtu sadarkaa dhumaa/xumura waan ta’eef, warri qabsoo kana dabarsuuf, maqaa hin taane itti kennuu fi abbaa irratti ta’uu barbaadan hedduun munyuuqataa jiran waan ta’eef ummanni Oromoo yeroon itti baaqaa fi callaa itti adda baasu amma.
Warri hoggaa 40 erga addi bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannoo jalqabee kaasee ergama diinaa fudhatee dhaaba kana balleysu yo dandame akeeka isaa jijjiiruu irratti bobba’an akkuma hujii isaanii itti fufanitti jiran. Keessattuu Obbo Leencoo Lataa erga adda bilisummaa Oromotti dabalamee kaasee dhaaba kana diiguu, facaasuu, miseesota sabbonoo warra Oromumman keessatti gadi fagoo taate ajjeesisiisuu irratti xiyyeefatee hojjechaa turun isaa Oromoota baayyeef ifaa dha. Kun qabatamaan akka afaan obbo Leencoo Lataa midia Habashaa gubbatti dubbatetti quot “an bosona wantiin bu’eef OLF keessaa warra hardcore ta’an balleysuuf” (Leencoo Lataa). Jalqaba akka bosoma bu’een Baharoo ajjesiise, itti aansee yeroo chaartarii waraana Oromoo irraa hiiksisee mooraa adda addaa keessatti akka marfamanii TPLFiin dhumaniif shirri inni xaxe hedduu guddaa ta’uuf ayyaanni Oromoo ilmaan Oromoo baayyee. Warri hardcore jedhaman kan akka Buriysoo Boru, Nadhii Gammaddaa, Guutamaa Hawaas fi warren kana fakkaatan dhumaati information gayaan lafa isaan jiranitti akka rukutaman kennamee fi akka jiruus ifaa dha. Karaa kaaniin waraanni bilisummaa Oromoo WBOn hidhannoo guutuu waliin akka diinatti harka kennu kan goosise (Licho Bukra) obbo Leencoo Lataati. Shirri obbo Leecoo Lataa ummata Oromoo irratti hojjete kana duwwaa miti.
Kana hunda godhee erga diigumsa guddaa dhaaba kana irratti hojjete booda itti dhaqqabanii badii saniif yeroo hujii irraa ariamu ammaas keessa taa’ee diiguu yoon dadhabe, ala taa’ee diiguu hin dadhabu jedhe hujii isaa itti fufe akkuma indaaqoon/lukkuun nyaadhee fixuu yoon dadhabe facaasee fixuu hindadhu jette san godhuu jalqabe. Kana irraa kan ka’e hoggaa afur dura dhaaba ODF jedhu dhaabee hujii seexxaanummaa itti fufe. ODF jechuun hiikaan isaatuu Oromoo, Diiguu, Facaasuu jechuu dha. Murni ODF jedhee if moggaase kun kaayyoon saanii karaa naga’an qawwee/hidhannoo lagatanii Ethiopia democrateysuu dha. Waan hedduu nama ajaaibsiisu keessaa nuti qawwetti hin amannu jechaa dhaaba G7 kan gaallaa gadai jedhee ifijaare kan jibbansa hagana hin jedhamne ummata Oromoo irra qabu jalatti hiriiruun isaanii maal namatti agarsiisa kun joonjinsa siyaasaa moo tooftaa jedhama? An kana deebi’ii ummatuma Oromoo tii fiin dhiisa. Murni kun diinota Oromoo warra Oromia wanni jedhan hin jirtu, Oromoon seenaa sobaa barreysiti, Oromoon seenaa hinqabdu warra jedhu waliin halkan halkan Oromoo haala itti diigan irratti mariachaa bulan. Guyya guyyaa karaa manguddoota isaanii wa’ee tokkumma Oromoo waliin labsuu hafarsu. Kun jechuun jeedala kalloo Hoolaa uffattee Hoolaa keessa teessee Hoolaa nyaatu jechuu dha. Murni kun kaayyoo isaanii qofa otoo hin ta’in gariin isaanii dhiigaaniis Oromoo ta’u dhaba Dr. Diimaa Nago an Oromoo keesattiin dhaladhe malee Oromoo miti jedhee midia Habashaa irratti dubbachuun isaa ragaa guddaa dha. Murni kun qaanii takka malee TPLF tan dhiiga ilmaan Oromoon qaama dhiqachaa jirtu, tan dargagoota, abboota, aayyota, daldaloota hunda ilmaan Oromoo qe’ee isaanii irratti akka bineesaa ari’ee rasaasaan adda adda isaanii keessa rukutaad duguuggaa shanyii/jenocide deemsisaa jiruun hujiin keessan gaarii dhaa fudhanee jirraa nugalchaa jichaa akka ammallee kadhachaa jiran interview Leencoo Baatii Geetachew Raddaa waliin godhe irraa hubachuun nidanda’ama. Akkasuma obbo Leencoon biyya galee akka ariamee deebi’e namuu nibeeka. Kun maal nugarsiisa, murni kun aangoo mataa saanii malee dhiigni Oromoo kan akka bishaanii dhangala’aa jiru humaa itti hin dhagamu jechuu dha. Kan asii olitti jiru kun akkuma jirutti ta’e hujiin murni kun hojjechaa jiru nama gadi fageysee laaleef hedduu waan nama ajaaibsiisuu fi waan hedduu nama salfachiisu. Kuniis jarri kun Bayaan Asoba asii dhaabbolii Oromoo waliin tokkummaa mallateysa, Leencoo Lalataa Habashoota diinota Oromoo waliin tokkummaa mallatteysa, Leencoo Baatii warra TPLFiin nugalchaa nigallaa jedhee kadhata. Mee laalaa yaa Oromoo kun hundi kan ta’u yeruma gabaabaa keessatti.
Dhuma irratti an akka yaada kiyyatti ODF akka dhaaba Oromoof dhaabbatu tokkotti mooraa Oromoo keessa olii fi gadi akka saree maraattee fiiguun isaanii Oromoof humaa waan fayyadu keessaa argaa hinjiru. Caalatti miidhaa isaan ummata Oromoo fi qabsoo Oromoo irra fidaniitu cala. Kanaaf ummanni Oromoo arra sadarkaan irra jiru sadarkaa namni biraa/kan isa bakka hinbuune naatu siif beeka jedhuun bira darbee Jira. Arra ummanni Oromoo waan isaaf tolu nibeeka. Yeroon kun yeroo sabni kun baaqaaf callaa, diinaaf fira adda baasee qabsaa’ota isaa, Qeerroo, WBO fi dhaaba isaa kan kaayyoo ganamaa bilisummaa Oromoo mirkaneeysuuf kufee kuffisaa jiru ABO jabeysuu qofaatu furmaata.
Injifannoon Tan Ummata Oromooti!